We She Me: သားလေး ဖွားစဉ်က (၃)
War War - 6/1/08, 10:25 PM
Zat shein myint hma pyat thwar p.4ko pe wait ya tot hmar pot. :)
မဇနိ - 6/1/08, 11:16 PM
တခါမှ မကြားဖူးတာတွေ ဖတ်ရတယ်ဗျ။
ကဲဗျာ ကျွန်မပဲ တက္ကစီပြေးငှားလိုက်တော့မယ်။
ဒါမှ ကလေးလေးမွေးခန်းရောက်တော့မှာ ထင်ပါတယ်။
Lay Thwe - 6/1/08, 11:21 PM
It's really nice to read this blog! I'm also waiting for the new parts of this article. Thanks for the contribution of your knowledge.
စစ်ကိုင်းသူ - 6/2/08, 2:12 AM
ကိုအန်ဒီကတော့ ကိုရီးယား ဇာတ်ကားတွေလို လုပ်နေပြန်ပါပြီ။ မဇနိကတောင် Taxi ပြေးငှားပေးတော့မယ်ဆိုပဲ။ ဖတ်ချင်လှပြီနေမှာ။ ဒါနဲ့ ဆေးရုံက ဘာလို့ အဲလောက်ကပ်မှ အလာခံရတာလဲ။ ဘယ်လောက်စိပ်စိပ်နာမှ မွေးမယ်လို့ ပုံသေသတ်မှတ်လို့ ရလို့လား။ ကိုအန်ဒီတို့က သားဦးမဟုတ်လို့ သိနေလို့လေ။ သားဦးမွေးမဲ့လူတွေဆို ဘယ်လိုလုပ် သိမလဲ။ မွေးခါနီးလား မနီးလားလဲ မမှန်းတတ်၊ ကျန်တာဘာမှ မဖြစ်ဘူးထားဦး အဲလို ရေမြွာပေါက်မှသာ ဆိုလို့ကတော့ စိတ်ပူတာနဲ့တင် နေစရာ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲလိုကျပြန်တော့လဲ ပိုက်ဆံပေးတက်ရတဲ့ဆီက ကိုယ့်ပိုက်ဆံကုန်ပေမဲ့ စိတ်အေးလက်အေး ဆေးရုံပေါ်မှာ သွားနေလို့ ရသေးလို့ တော်သေးတယ်လို့ ပြောရမလား မသိ။
Andy Myint - 6/2/08, 4:00 PM
အရှည်ကြီး ဖတ်ရတာ ပျင်းမှာ စိုးလို့ပါ ၀ါဝါရေ...
ဒီလိုပဲ မဇနိရေ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်း၊ မိခင်တိုင်းမှာ ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်စီ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ကလေးမွေးခန်း ရောက်အောင် Fast Forward လုပ်ကြည့်လေ.. ဗီဒီယို ကြည့်သလို..ဟဲဟဲ။
Thanks, Lay Thwe.
တချို့မိခင်တွေကလည်း တကယ် ဗိုက်နာတာလား မခွဲခြားနိုင်လို့ ဆေးရုံသွားတာ ဆေးရုံက ပြန်လွှတ်လိုက်တယ် ထင်ပါတယ် မစစ်ကိုင်းသူ။ နောက်ပြီး ဒီမှာက ပြည်သူပိုင် ဆေးရုံတွေမှာက ၀န်ထမ်းအားနဲ့ လူနာအားမမျှဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့်။ Private health insurance ရှိထားရင်တော့ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံမှာ မွေးလို့ ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပိုက်ပိုက် တတ်နိုင်ရင်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ပြည်သူပိုင်မှာပဲ မွေးတယ်လေ။
Aung - 8/1/12, 2:00 PM